Salmonella (ခ) ဝမ်းပျက်ခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ ပိုးအကြောင်းတစေ့တစောင်း | Opinion Leaders
ဒီအပတ်မှာတော့ လတ်တလော ကြက်သားအစိမ်းများတွင် ပါတယ်လို့ တွေ့ထားတဲ့ Salmonella လို့ခေါ်တဲ့ ပိုးအကြောင်း ဖော်ပြပေးမှာပါ။ ဒီ Salmonella ပိုးဟာ အူလမ်းကြောင်း တလျှောက်ရောဂါပေးတဲ့ အုပ်စုဝင်ထဲက ဘက်တီးရီးယားပိုး တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးကွဲပေါင်းထောင်ချီရှိတာဖြစ်ပီး အကြမ်းအားဖြင့် တိုက်ဖွိုက်ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ Salmonella ပိုးအုပ်စု (Typhoidal) နှင့် ဝမ်းပျက်တာပဲ ဖြစ်စေပြီး တိုက်ဖွိုက်လက္ခဏာမဖြစ်တဲ့ အုပ်စု (Non-typhoidal group) ဆိုပီး ခွဲနိုင်ပါသည်။ ယခု ဖော်ပြမှာကတော့ Non-typhoidal အုပ်စုထဲမှာပါတဲ့ ပိုးအကြောင်းပါ။
ဒီ ဝမ်းပျက်စေတဲ့ ပိုးဟာ ဘယ်လိုကူးစက်တတ်ပါသလဲ?
တိရိစ္ဆာန် နဲ့ ထိတွေ့မိခြင်း၊
၂)ပိုးရှိတဲ့ အသားစိမ်းတွေနဲ့ မကျက်တကျက်
ချက်ထားတဲ့ အသားတွေကို စားသုံးမိခြင်း၊
၃) အစားအစာထဲမှာ ပိုးရှိတဲ့ တိရိစ္ဆာန်ရဲ့ မစင်အညစ်အကြေးပါနေခြင်း၊
၄) ဥနှင့် နို့၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းများ အပြင်
၅) ဒီပိုးပါနေတဲ့ ရေကို သောက်သုံးမိရင်လည်း ရောဂါကူးစက်နိုင်ပါသည်။
တိရိစ္ဆာန်ကနေ လူကို ကူးစက်နိုင်သလို လူ လူချင်းလည်း ကူးစက်နိုင်ပါသည်။ အစားအစာကိုင်တွယ်ချက်ပြုတ်သူတွေရဲ့ မသန့်ရှင်းတဲ့လက်ကနေ တဆင့် လည်း ကူးစက်ပါတယ်။
ဘယ်လိုရောဂါ လက္ခဏာတွေနဲ့ တွေ့ရမှာလဲ?
ဒီပိုးဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ရောက်ပီးလို့ ၁၂နာရီကနေ ၇၂ နာရီ အတွင်းမှာ ဒီလို ရောဂါလက္ခဏာတွေ တွေ့ရမှာပါ။
-အချို့သူတွေမှာ အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပိုး ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရှိ/မရှိကိုတော့ လူနာရဲ့ ဝမ်း သို့မဟုတ် သွေးထဲကနေ ပိုးမွေးကြည့်ခြင်းဖြင့် သိနိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ဒီပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဝမ်းပျက်ခြင်းဟာ ပြင်းထန်လေ့မရှိပဲ ပိုးသတ်ဆေးပေးစရာမလိုပဲ ရက်သတ္တပတ် တစ်ပတ်လောက်အကြာမှာ ကောင်းသွားတတ်ပါတယ်။ ဝမ်းသွားတာအတွက်တော့ လိုအပ်တဲ့ ရေဓါတ်ဖြည့်တင်းမှု (ဥပမာ ဓါတ်ဆားရည် ORS တိုက်ပေးဖို့လိုမှာပါ။) ကလေးငယ်တွေနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ရောဂါပြင်းထန်တဲ့ သူတွေမှာတော့ ပိုးသတ်ဆေးပေးဖို့ လိုမှာပါ။ Fluoroquinolones အုပ်စုဝင် ပိုးသတ်ဆေးတွေကတော့ ဒီပိုးအတွက် ထိရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပိုးက ရောဂါပိုးရှိနေတဲ့ အစားအသောက်တွေက တဆင့် ကူးစက်တတ်ပေမယ့် အပူချိန် 60°C (140°F) လောက်မှာ 12မိနစ်လောက် အပူပေးရင် သေနိုင်တာမို့ ကျက်နေအောင် ချက်ပြုတ်စားသောက်မယ်ဆို ဒီပိုးကူးစက်မှာ မစိုးရိမ်ရပါဘူး။ နောက်တခုကတော့ အသားစိမ်း ငါးစိမ်းကိုင်ပီးတိုင်း လက်ကို ဆပ်ပြာနဲ့ စင်ကြယ်အောင် ဆေးကြောခြင်း နှင့် အသား ငါးလှီးဖြတ်ထားတဲ့ ဓါး စဉ့်နီတုန်း စတာတွေကိုလည်း သေချာ ဆပ်ပြာနဲ့ ဆေးကြောပီးမှသာ အခြား အစားအသောက်ချက်ပြုတ်ရာမှာ သုံးသင့်ပါတယ်။ ဒီလို စနစ်တကျ ကိုင်တွယ် ချက်ပြုတ်မယ် ကျက်အောင်လည်း ချက်မယ်ဆိုရင်တော့ အသားအစိမ်းမှာ ပိုးပါခဲ့ရင်တောင် ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရမှာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။
ဇီ၀က ဆေး (၁)